Waxaan leeyahay saaxiibo isku dhow oo aan ka qoomameyno inaysan ka qeybgalin munaasabadaha gobolka oo ay xiriir la leeyihiin madaxdii hore ee ay la soo shaqeeyeen. Sannado ka dib, waxay ogaadeen inay ka dhuunteen tooshka oo ay hadda u baahan yihiin inay 'la qabsadaan' si ay u helaan jihada si ay u helaan shaqada ama fursadda ay raadinayaan. Si fudud dib ugama heli kartid waqtigaas!
Sababta waa mid fudud - isku xirka wuxuu ii horseeday inaan helo shaqadayda aasaasiga ah sidoo kale waxay ii horseedday dhammaan fursadaha dugsiga sare. Shabakadda la'aanteed, anigu ma joogi doono meesha aan joogo - mana lahaan lahayn fursado ii furmay si aan u aado halka aan ku xigi doono.
Isku xirka waa maalgashi. Dusha sare, waxay u egtahay inaad waqti iyo tamar ku bixineyso la-talin, adeegyo ama aad ku ballaarinaysid shabakaddaada lacag la'aan. Si kastaba ha noqotee, xiriiradaan waxaad ku kasbaneysaa kalsoonida dadka iyo inaad ku dhisatid awood ku saabsan mowduuca aad ku jirto.
Haddii iskuulku dalbanayo kuhadalka dadweynaha sida xirfad loo baahan yahay, barayaashu waa inay siiyaan isku xirka dareenka u qalma. Ardayda waa in wax lagu baraa raadinta fursadaha isku xirnaanta, sida loo jiheeyo loona kobciyo xiriirkooda shabakadeed, kobcinta joogitaanka khadka tooska ah - iyo sidoo kale sida looga faa'iideysto dhammaan waxyaabaha kor ku xusan. Haddii aadan buuxin karin koorso la aqoonsan yahay oo ku saabsan mowduuca, waxaan rajeynayaa inaan arko jaamacadaha iyo kulliyadaha oo horumarinaya aqoon isweydaarsiyo ku saabsan mowduuca.